Posted by Fros October 17, 2015
Credit to Khaing Su Hlaing , Copy From Myanmar Mi Fans Facebook Group
ေအာက္ကနည္းမ်ားအားလံုး Redmi note 3g v5 MIUI5မွာ မသံုးပါနဲ႔
1. Font အလွ
2. Theme Font (No need root)
Settings > Additional Settings > Fonts > choose system font > type Zawgyi and apply it
Settings > Fonts > type Zawgyi and apply it.
method3:2droidsan လဲနည္း
မေန႔ကကြၽန္ေတာ္ေပးခဲ့တဲ့ Mi ဖုန္းေတြအတြက္ ျမန္မာစာ mi font.zip နဲ႔ အဆင္မေျပသူေတြအတြက္ ေနာက္တခုထပ္ေပးမယ္ေနာ္ ဒါကေတာ့ ေလာ္လီေပါ့အတြက္ ဖုန္းအားလံုးသံုးႏိုင္ေအာင္လို႔ ေဖာင့္ေရးသူက ရည္ရြယ္ထားတာပါ အခုေနာက္ပိုင္း mi phone ေတြအတြက္ေတာ့ က်ေနာ္ စမ္းထားသမွ်ေတာ့အဆင္ေျပတယ္ တခ်ိဳ႕ -် ေတြေတာ့ကပ္တယ္ဗ် အကုန္မဟုတ္ဘူး ႐ွားေတာ့႐ွားပါတယ္ ..
တင္ပံုတင္နည္းကေတာ့ အေ႐ွ႕က တခုအတ္ိုင္းပါပဲ cwm, twrp ထဲက flash လို႔ရသလို root explorer ထဲကေန ႐ွိသမွ်ေဖာင့္ ကိုကူးထည့္ အခုေဖာင့္အတြက္စီစဥ္ထားသူက samsung အတြက္အဓိကျဖစ္လို႔ samsung နာမည္ပါတာေတြမကူးထည့္ပဲခ်န္ထားလို႔ရပါတယ္ .. ကူးၿပီး permission ေျပာင္း etc ေအာက္ထဲကဟာေတြလည္းကူးၿပီး system ေအာက္က etc ေအာက္ထဲထည့္ permission ေျပာင္း reboot လုပ္ၿပီးသံုးပါေလ
MMAS နဲ႔ MMUG အတြက္ အျမဲေပးဆပ္ေနမယ့္ ကိုကိုၾကပ္
မွတ္ခ်က္။ Mi4i, Mi Note Pro အတြက္မေသခ်ာပါ
5. Mi Font Zip ( One Version )
Mi ဖုန္းေတြမွာ ျမန္မာစာထည့္ခ်င္လွ်င္ အခု zip ဖိုင္ကို cwm မွ flash ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ Root Explorer မွာ တဆင့္ zip ဖိုင္ထဲမွ zawgyi ဖိုင္ကို root >system>fonts> ထဲကူးထည့္ၿပီး permission ကို rw-r-r- ေျပာင္းေပးပါ zip ထဲက etc ထဲကဖိုင္ကိုကူးၿပီး root>system >etc> ေအာက္ထဲကူးထည့္ၿပီး permission ကို rw-r-r- ေျပာင္း ၿပီးရင္ reboot လုပ္ေပးၿပီးျပန္တက္လာရင္ ျမန္စာလံုးလွလွေလးကို ၉၀%မထပ္ပဲ သံုးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္
အခုတင္ေပးလိုက္တဲ့ mi font.zip ဖိုင္ကို myanmar mi fan ထဲမွရထားတာပါ ဘယ္သူ႔ဟာမွန္းမသိလို႔ ခရက္တစ္ မေပးေတာ့ဘူးေနာ္ ....
6. MI3/MI4 ျမန္မာစာ (ေဇာ္ဂ်ီ)
Ko Sai Arkar (MIUI6အထိပဲရပါတယ္)
Credit to : Ko Sai Arkar
Myanmar MI Fans ထဲက MI3/MI4 ကိုင္ထားၿပီး Version အသစ္ထြက္တုိင္း ျမန္မာစာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားလို႕ စိတ္ညစ္ေနရပါသလား ... ??
Font Changer ေတြေၾကာင့္ Bootloop ေတြျဖစ္ၿပီး လိုဂိုမွာ ရပ္ေနတာေတြကို စိတ္ရႉပ္ေနရပါသလား ... ??
ဟို ေဖာင့္ခ်ိန္ဂ်ာ ဒီေဖာင့္ခ်ိန္ဂ်ာေတြ သံုးၿပီး Emoj ေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ စာေတြမမွန္လို႕ စိတ္ညစ္ေနရပါသလား ..
OTA မပ်က္ Root မလုပ္ပဲ ျမန္မာစာ ေဇာ္ဂ်ီ သြင္းလိုပါသလား ...
ဘယ္ဗားရွင္းမွာ မဆို အကုန္အလုပ္လုပ္တဲ့ MI3/4 အတြက္ OTA zip file လိုမ်ိုး update.zip ေလးကို မွ်ေ၀ေပးပါရေစ ...
အဂၤလိပ္စာလံုးလည္းလွ ျမန္မာစာလည္းမွန္ Emoj လည္းမေပ်ာက္
ေအာက္မွာေပးထားတာေလးကို ေဒါင္းလိုက္ပါ ..။
အဲ့ဒီဖိုင္ကို updater ကေန select update from internal storage လုပ္လုိက္ပါ .. တစ္မိနစ္ခြဲခန့္ ေစာင့္ပါ ...
Reboot Now ေပၚလာရင္ Reboot ခ်လုိက္ၿပီး ျပန္စမ္းၾကည့္လိုက္ပါ ...။
၉၈ရာခိုင္ႏႉန္း မွန္ဆန္ေသာ Root မလို Custom recovery မလို OTA zip file ကဲ့သို႕ သံုးႏုိင္ေသာ zip file ေလးျဖစ္ပါတယ္ ...။ မေတာက္တေခါက္ လုပ္ထားတာမို႕ အမွားအယြင္းလည္း ပါႏုိင္ပါတယ္ ...။ မရရင္ ျပန္ေျပာေပးပါ ..။
zip file password က saiarkar@winmobile ပါ ..။
Google မွာ မရွိပါဘူး .. MI Fans ေတြအတြက္ သီးသန့္လုပ္ေပးတာပါ ..။
Download Here => http://d-h.st/FClB
place your root directory of internal storage
use updater app and choose update package from internal storage
wait 1.5 min
7. MI3/MI4 ျမန္မာစာ (ေဇာ္ဂ်ီ)
Ko Sai Arkar (MIUI7အတြက္)
MiUi7 Mi3/Mi4 အတြက္ No Root mm font OTA Zip ပါ...
Dev ROM မွာဆိုေပမဲ့ Stable ထြက္လာရင္လည္းသံုးလို့ရမွာပါ ..။
emoj မေပ်ာက္ .. ယပင့္မကပ္ႆမထပ္ ..blah blah blah
သင့္အတြက္ အသံုး၀င္တယ္ဆို တျခားသူေတြအတြက္လည္း ပို့စ္ေလးကို အေပၚတက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ပါ ..။
အသံုးျပုနည္းကေတာ့ ပံုမွန္အတုိင္းပါပဲ ..။ Updater ကေန install လုပ္ေပးရံုပါ ..။
Download Link (1) => http://d-h.st/aauX
Download Link (2) => http://pc.cd/eJJrtalK
P/s : ျဆာသမားေတြအတြက္ လုပ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ ..။ ေက်ာ္တို့လို လူေတြ အတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ သံုးလို့ရေအာင္လုပ္ထားတာပါ .။ သံုးလို့မရဘူးဆို ျပန္ေျပာေပးပါ ..။
8. MIUI6အတြက္သာ
9. Theme Font For Some
mm font mtz file. theme font သံုးခ်င္တဲ့လူမ်ားအတြက္ပါ.. တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြမွာရပီး တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြမွာေတာ့ မရပါ...ကလိထားတာေလးေတြကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းသာ...
10. Mi4i/Mi Note Pro
1]. theme font replacement (root မလိုပါ)…
2]. fontchanger (root လိုပါတယ္)….
Install လုပ္ပီးသြားရင္ app ကိုဖြင့္လုိက္ပါ ပထမဆံုးျမင္ရမွာကေတာ့ basic…. advance ဆိုတာကိုပါ… advance ကိုေရြးပါ… mi4i က lollipop ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစားထိုးရမယ့္ေဖာင့္က notosansmyanmarUi… စတဲ့ ေဖာင့္ေလးမ်ဳိးပါ… အဲဒီ့ေဖာင့္ေတြကိုေထာက္ပီး ကိုယ္အစားထိုးမဲ့ေဖာင့္ကို ရွိေနတဲ့ေနရာေရြးေပးရပါမယ္… ဥပမာ.. ကိုယ္သံုးခ်င္တဲ့ေဖာင့္က download ထဲမွာဆုိရင္ ျပင္မဲ့ေဖာင့္ကို ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ folder ေရြးရမယ့္ search box ေပၚလာမယ္ အဲဒီ့ကေန download ကိုေရြး ကိုယ္သံုးမဲ့ေဖာင့္ကို ကလစ္ေပးလုိက္ပါ… ေရြးလုိက္ပီဆိုတာနဲ႔ reboot now… reboot later ဆိုတာေပၚလာမယ္ reboot later ကိုေရြးပါ အားလံုး ေလးခုစလံုးကို ေရြးပီးပီဆိုမွ reboot now ကိုႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ reboot ျပန္တက္လာပီဆုိရင္ေတာ့ ေနရာတုိင္းမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ျမင္ရပါပီ… အခု ဒီနည္းဟာ update မေပးေသးတဲ့ကာလမုိ႔ ota update ရမရဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါ...
(ဒီနည္းကိုသံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အရင္ဆံုး advance ထဲကို ၀င္ပီးတာနဲ႔ ေဖာင့္မျပင္ေသးခင္ အရင္ဆံုး ကို္ယ္ျပင္ရမယ့္ သက္ဆုိင္ရာေဖာင့္ ေလးခုစလံုးကို ေကာ္ပီလုပ္ပီး တျခားစိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာမွာ သိမ္းထားပါ.. Ota update မရခဲ့ရင္ ေအာ္ရီဂ်င္နည္အတိုင္း ျပန္သံုးခ်င္ရင္ အဲဒီ့ေဖာင့္ေလးေတြကို ျပန္ထည့္ေပးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆင္ေျပပါမယ္)
3]. root explorer(root လိုပါတယ္)…
4]. ေနာက္တနည္းကေတာ့ twrp recovery ကေန totalsoultion.zip (root လိုပါတယ္) ကို flash လုပ္တဲ့နည္းပါ သူကေတာ့ တခ်က္တည္းနဲ႔ အားလံုးကိစၥပီးပါတယ္… မေသခ်ာတာကေတာ့ ota update ရႏိုင္ မရႏိုင္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ.. Twrp recovery ကေန install zip ကိုသြားပီး ဒီဖုိင္ေလးကို ထည့္ထားတဲ့ ဖိုဒါကိုေရြး ပီးရင္ ဒီေကာင္ေလးကို အင္စေတာလုပ္ေပးလုိက္ရံုပါပဲ ပီးရင္ reboot now ႏွိပ္လုိက္ပါ ျပန္တက္လာရင္ ျမန္မာစာျမင္ရပါပီ.. လြယ္တယ္ ျမန္တယ္…. ေအာက္မွာ လင့္ပါ…
5]. ေနာက္တနည္းကေတာ့ lollipop အတြက္ developer ko phyo chan ေရးထားတဲ့ application ေလးပါ.. root လိုပါတယ္ သံုးရတာလည္း အဆင္ေျပပီး ေဖာင့္က ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ ၀ိုင္း၀ိုင္းေလးပါ.. ထူးျခားတာက app မွာ font converter ပါ၀င္လာျခင္းမွာ app ထဲကို၀င္လုိက္ပီး ယူနီေဖာင့္ကို အထဲမွာ paste လုပ္လုိက္တာနဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္… zawgyi အျမဲတမ္းေျပာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ L click here ဆိုတာေလးကို တခ်က္ႏွိပ္ေပးပီး reboot က်ပီးတာနဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီျဖစ္သြားမွာပါ….
6]. ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး.. အခု mi4i မွာ xposed သံုးလုိ႔မရေသးလုိ႔ ဒီနည္းကေတာ့ အသံုးမ၀င္ေသးပါဘူး.. ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အသံုး၀င္လာမွာပါ.. သူကေတာ့ system font ကို unicode အတုိင္းထားပီးေတာ့ app တခုခ်င္းစီကို zawgyi သံုးတာပါ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ xposed ရယ္ fonter app ကို install လုပ္ပီး xposed ရဲ႕ module မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပီး reboot ခ် ပီးရင္ fonter ကေန သံုးလုိ႔ရပါပီ...
Mi Phone အားလုံးအတွက် Myanmar Font ဖြစ်တဲ့ ZawGyi Font ထည့်နည်း ပေါင်းစုံလေးပါ။
အောက်ကနည်းများအားလုံး Redmi note 3g v5 MIUI5မှာ မသုံးပါနဲ့
1. Font အလှ
3. ဇော်ဂျီလည်းမြင်ရတယ် COC မှာလည်းမြင်ရတယ်
method 1 : ifont with system mode (playstoreကနေဒေါင်းပါ)
method2: fonter with standard mode must tick both roboto n fallback (playstoreကနေဒေါင်းပါ)
method3:2droidsan လဲနည်း
မှတ်ချက်။ Mi4i, Mi Note Pro အတွက်မသေချာပါ။ MIUI7 မှာပါ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ Mi ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာ mi font.zip နဲ့ အဆင်မပြေသူတွေအတွက် နောက်တခုထပ်ပေးမယ်နော် ဒါကတော့ လော်လီပေါ့အတွက် ဖုန်းအားလုံးသုံးနိုင်အောင်လို့ ဖောင့်ရေးသူက ရည်ရွယ်ထားတာပါ အခုနောက်ပိုင်း mi phone တွေအတွက်တော့ ကျနော် စမ်းထားသမျှတော့အဆင်ပြေတယ် တချို့ -ျ တွေတော့ကပ်တယ်ဗျ အကုန်မဟုတ်ဘူး ရှားတော့ရှားပါတယ် ..
တင်ပုံတင်နည်းကတော့ အရှေ့က တခုအတ်ိုင်းပါပဲ cwm, twrp ထဲက flash လို့ရသလို root explorer ထဲကနေ ရှိသမျှဖောင့် ကိုကူးထည့် အခုဖောင့်အတွက်စီစဉ်ထားသူက samsung အတွက်အဓိကဖြစ်လို့ samsung နာမည်ပါတာတွေမကူးထည့်ပဲချန်ထားလို့ရပါတယ် .. ကူးပြီး permission ပြောင်း etc အောက်ထဲကဟာတွေလည်းကူးပြီး system အောက်က etc အောက်ထဲထည့် permission ပြောင်း reboot လုပ်ပြီးသုံးပါလေ
MMAS နဲ့ MMUG အတွက် အမြဲပေးဆပ်နေမယ့် ကိုကိုကြပ်
မှတ်ချက်။ Mi4i, Mi Note Pro အတွက်မသေချာပါ
Mi ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာထည့်ချင်လျှင် အခု zip ဖိုင်ကို cwm မှ flash ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ Root Explorer မှာ တဆင့် zip ဖိုင်ထဲမှ zawgyi ဖိုင်ကို root >system>fonts> ထဲကူးထည့်ပြီး permission ကို rw-r-r- ပြောင်းပေးပါ zip ထဲက etc ထဲကဖိုင်ကိုကူးပြီး root>system >etc> အောက်ထဲကူးထည့်ပြီး permission ကို rw-r-r- ပြောင်း ပြီးရင် reboot လုပ်ပေးပြီးပြန်တက်လာရင် မြန်စာလုံးလှလှလေးကို ၉၀%မထပ်ပဲ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ mi font.zip ဖိုင်ကို myanmar mi fan ထဲမှရထားတာပါ ဘယ်သူ့ဟာမှန်းမသိလို့ ခရက်တစ် မပေးတော့ဘူးနော် ....
6. MI3/MI4 မြန်မာစာ (ဇော်ဂျီ)
Ko Sai Arkar (MIUI6အထိပဲရပါတယ်)
Myanmar MI Fans ထဲက MI3/MI4 ကိုင်ထားပြီး Version အသစ်ထွက်တိုင်း မြန်မာစာ (ဇော်ဂျီ) ပျောက်ပျောက်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား ... ??
Font Changer တွေကြောင့် Bootloop တွေဖြစ်ပြီး လိုဂိုမှာ ရပ်နေတာတွေကို စိတ်ရှူပ်နေရပါသလား ... ??
ဟို ဖောင့်ချိန်ဂျာ ဒီဖောင့်ချိန်ဂျာတွေ သုံးပြီး Emoj တွေ ပျောက်ပျောက် စာတွေမမှန်လို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား ..
OTA မပျက် Root မလုပ်ပဲ မြန်မာစာ ဇော်ဂျီ သွင်းလိုပါသလား ...
ဘယ်ဗားရှင်းမှာ မဆို အကုန်အလုပ်လုပ်တဲ့ MI3/4 အတွက် OTA zip file လိုမျိုး update.zip လေးကို မျှဝေပေးပါရစေ ...
အင်္ဂလိပ်စာလုံးလည်းလှ မြန်မာစာလည်းမှန် Emoj လည်းမပျောက်
အောက်မှာပေးထားတာလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ..။
အဲ့ဒီဖိုင်ကို updater ကနေ select update from internal storage လုပ်လိုက်ပါ .. တစ်မိနစ်ခွဲခန့် စောင့်ပါ ...
Reboot Now ပေါ်လာရင် Reboot ချလိုက်ပြီး ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ...။
၉၈ရာခိုင်နှူန်း မှန်ဆန်သော Root မလို Custom recovery မလို OTA zip file ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သော zip file လေးဖြစ်ပါတယ် ...။
မတောက်တခေါက် လုပ်ထားတာမို့ အမှားအယွင်းလည်း ပါနိုင်ပါတယ် ...။ မရရင် ပြန်ပြောပေးပါ ..။
Google မှာ မရှိပါဘူး .. MI Fans တွေအတွက် သီးသန့်လုပ်ပေးတာပါ ..။
7. MI3/MI4 မြန်မာစာ (ဇော်ဂျီ)
Ko Sai Arkar (MIUI7အတွက်)
MiUi7 Mi3/Mi4 အတွက် No Root mm font OTA Zip ပါ...
Dev ROM မှာဆိုပေမဲ့ Stable ထွက်လာရင်လည်းသုံးလို့ရမှာပါ ..။
emoj မပျောက် .. ယပင့်မကပ် ဿ မထပ် ..blah blah blah
သင့်အတွက် အသုံးဝင်တယ်ဆို တခြားသူတွေအတွက်လည်း ပို့စ်လေးကို အပေါ်တက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါ ..။
သုံးပြုနည်းကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ ..။ Updater ကနေ install လုပ်ပေးရုံပါ ..။
P/s : ဆြာသမားတွေအတွက် လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ..။ ကျော်တို့လို လူတွေ အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတာပါ .။ သုံးလို့မရဘူးဆို ပြန်ပြောပေးပါ ..။
Thanks all :#WinMobileWorld#Mi3Mi4 #mmZG#OTAzip#MiFan
8. MIUI 6အတွက်သာ(5.8.6တွင်တော့မရပါ) ဖုန်းအားလုံးအတွက် COCမရပါ
mm font mtz file. theme font သုံးချင်တဲ့လူများအတွက်ပါ.. တချို့ဖုန်းတွေမှာရပီး တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ မရပါ...ကလိထားတာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှခြင်းသာ...
1]. theme font replacement(root မလိုပါ)…
ဒီနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်…..
ဒါပေမဲ့ မိမိမှာ mi account ရှိရန် လိုပါတယ်.. ဖောင့်ကို ဒေါင်းတဲ့အချိန်နဲ့ apply လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet connection လိုအပ်ပါတယ်...
ပုံပြထားတာမို့လို့ ဒီပုံလေးကိုဒေါင်းပီး တဆင့်ချင်းစီလုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ..(စာပြန်ရိုက်ရမှာ ပျင်းလို့) သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ theme ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပါ၀ါပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်.. reboot လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် theme>customize>font>ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ဖောင့်ကို apply ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်…(root မလိုပါ)
2]. fontchanger(root လိုပါတယ်)….
မြန်မာဖောင့်ကို ဘာဖောင့်သုံးရမှန်းမသိသေးဘူးဆိုရင် ဒီဖောင့်လေးက အဆင်ပြေပါတယ်.
ဒီနည်းကတော့ unicode font replacement ကို root explorer ကနေ မလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက် အလွယ်သုံးလို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ apk လေးပါ.. သုံးရတာ လွယ်ပါတယ်..
Install လုပ်ပီးသွားရင် app ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပထမဆုံးမြင်ရမှာကတော့ basic…. advance ဆိုတာကိုပါ… advance ကိုရွေးပါ… mi4i က lollipop ဖြစ်တဲ့အတွက် အစားထိုးရမယ့်ဖောင့်က notosansmyanmarUi… စတဲ့ ဖောင့်လေးမျိုးပါ… အဲဒီ့ဖောင့်တွေကိုထောက်ပီး ကိုယ်အစားထိုးမဲ့ဖောင့်ကို ရှိနေတဲ့နေရာရွေးပေးရပါမယ်… ဥပမာ.. ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ဖောင့်က download ထဲမှာဆိုရင် ပြင်မဲ့ဖောင့်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ folder ရွေးရမယ့် search box ပေါ်လာမယ် အဲဒီ့ကနေ download ကိုရွေး ကိုယ်သုံးမဲ့ဖောင့်ကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ… ရွေးလိုက်ပီဆိုတာနဲ့ reboot now… reboot later ဆိုတာပေါ်လာမယ် reboot later ကိုရွေးပါ အားလုံး လေးခုစလုံးကို ရွေးပီးပီဆိုမှ reboot now ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ reboot ပြန်တက်လာပီဆိုရင်တော့ နေရာတိုင်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို မြင်ရပါပီ… အခု ဒီနည်းဟာ update မပေးသေးတဲ့ကာလမို့ ota update ရမရဆိုတာတော့ မသိသေးပါ...
(ဒီနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး advance ထဲကို ဝင်ပီးတာနဲ့ ဖောင့်မပြင်သေးခင် အရင်ဆုံး ကို်ယ်ပြင်ရမယ့် သက်ဆိုင်ရာဖောင့် လေးခုစလုံးကို ကော်ပီလုပ်ပီး တခြားစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားပါ.. Ota update မရခဲ့ရင် အော်ရီဂျင်နည်အတိုင်း ပြန်သုံးချင်ရင် အဲဒီ့ဖောင့်လေးတွေကို ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဆင်ပြေပါမယ်)
3]. root explorer(root လိုပါတယ်)…
ဒီဟာကို သုံးပီးလည်း original unicode တွေကို မိမိသုံးလိုတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အစားထိုးပီး သုံးလို့ရပါတယ် သူကလည်း အပေါ်က fontchanger လိုမျိုးပဲ သုံးရတာပါ သူက နည်းနည်းပိုပီးအဆင့်များသွားတာက ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ဖောင့်ကို အစားထိုးမဲ့ဖောင့်နဲ့ နာမည်တူအောင် အရင် rename ပေးပီးတော့မှ replace လုပ်ပီး permission ကို rw-r-r ပေးပီး reboot လုပ်ပေးရပါတယ်.. နည်းနည်းလေးခက်မယ်ထင်ရင်တော့ ဒီနည်းကို ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်.
4]. နောက်တနည်းကတော့ twrp recovery ကနေ totalsoultion.zip (root လိုပါတယ်) ကို flash လုပ်တဲ့နည်းပါ သူကတော့ တချက်တည်းနဲ့ အားလုံးကိစ္စပီးပါတယ်… မသေချာတာကတော့ ota update ရနိုင် မရနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ.. Twrp recovery ကနေ install zip ကိုသွားပီး ဒီဖိုင်လေးကို ထည့်ထားတဲ့ ဖိုဒါကိုရွေး ပီးရင် ဒီကောင်လေးကို အင်စတောလုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ပီးရင် reboot now နှိပ်လိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် မြန်မာစာမြင်ရပါပီ.. လွယ်တယ် မြန်တယ်…. အောက်မှာ လင့်ပါ…
5]. နောက်တနည်းကတော့ lollipop အတွက် developer ko phyo chan ရေးထားတဲ့ application လေးပါ.. root လိုပါတယ် သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပီး ဖောင့်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းလေးပါ.. ထူးခြားတာက app မှာ font converter ပါဝင်လာခြင်းမှာ app ထဲကိုဝင်လိုက်ပီး ယူနီဖောင့်ကို အထဲမှာ paste လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဇော်ဂျီအဖြစ် မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်… zawgyi အမြဲတမ်းပြောင်းချင်ရင်တော့ L click here ဆိုတာလေးကို တချက်နှိပ်ပေးပီး reboot ကျပီးတာနဲ့ ဇော်ဂျီဖြစ်သွားမှာပါ….
mi4i က xposed သုံးလို့မရသေးတဲ့အတွက် recovery ကိုသွားချင်ရင် tool folder>updater>menu နှိပ်ပီး reboot to recovery mode နဲ့သွားချင်ရင်သွား မဟုတ်ရင်လည်း ပါ၀ါပိတ်ပီး power+volume down နဲ့သွားရတဲ့အတွက် အချိန်ကြာတယ်လို့ထင်တဲ့ ညီအကိုများအတွက် ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ app လေးပါ ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. root ရှိပီးသားဖုန်းတွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်… ဒီကောင်လေးထဲကနေ reboot…. reboot recovery. reboot bootloader, shutdown စတာတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးပီး တချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ…..
6]. ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး.. အခု mi4i မှာ xposed သုံးလို့မရသေးလို့ ဒီနည်းကတော့ အသုံးမဝင်သေးပါဘူး.. နောင်တချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လာမှာပါ.. သူကတော့ system font ကို unicode အတိုင်းထားပီးတော့ app တခုချင်းစီကို zawgyi သုံးတာပါ ဘာလိုလဲဆိုတော့ xposed ရယ် fonter app ကို install လုပ်ပီး xposed ရဲ့ module မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပီး reboot ချ ပီးရင် fonter ကနေ သုံးလို့ရပါပီ...
root tool မှစလို့ ကျန်တဲ့ apps အားလုံးကို share လုပ်ပေးကြသော မူရင်းဖန်တီးသူများနဲ့ လင့်များကို ရှယ်လုပ်ပေးကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. credit ပေးပါတယ်...
Kyaw Naing Tun နည္းပညာမွတ္စုမ်ား November 9, 2016 at 9:36 PM
note4pi အလံုးမွာျမန္မာစာမရတာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ေျဖးရွင္းေပၚရမလဲ ေျဖေပးၾကပါလားဗ်ာ